Olee otú Kpido Music na A Music Tagger
> Resource> Video> Olee otú iji Kpido Music Easily on Mac
Dị ka nnukwu music Fans, i nwere ike na-ege ntị dijitalụ music ọzọ mgbe n'oge. Ọ bụ ihe adaba n'ihi na nke mfe ohere na zuru ezu ọmụma. N'oge gara aga, i nwere ike na o siri ike ịgwa a mpempe music si aha Track 1, Track 2 ma ọ bụ ndị ọzọ. Ma ugbu a, ID3 mkpado, na-ese, album, genre ọbụna album nkà, na-agbakwunyere na music faịlụ. Ya mere, ị nwere ike ịmata na hazie faịlụ egwu gị.
Otú ọ dị, ID3 mkpado na-mgbe na-efu ma ọ bụrụ na ị na-ahụ music faịlụ site n'ịtụgharị ma ọ bụ Ndekọ. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ ịkpado music effortlessly? Ee, Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic) bụ a zuru okè music tagger inyere gị aka. Ọ nwere ike ịmata niile ọmụma banyere music, dị ka omenkà, artwork na ọbụna lyrics. Ka ego otú iji ya n'okpuru.
1 Tinye niile music ka music tagger
Mgbe music geo software emepe, ọ ga-amalite iṅomi gị iTunes Ọbá akwụkwọ na-akpaghị aka dispay na music na faịlụ tree gosiri dị ka n'okpuru.
Ị nwere ike mmezi nchekwa maka music bụghị jisiri site iTunes. Mbubata ndị songs ma ọ bụ song nchekwa, mkpa ka ị pịa na idozi Music taabụ na n'aka ekpe mmanya na ịdọrọ ndị song nchekwa na faịlụ tree aka ma ọ bụ pịa Open File bọtịnụ.
2 Malite ịkpado music
Ugbu a, na gị niile music faịlụ ndị na mmemme, ị nwere ike na-amalite na ịkpado na music. Họrọ otu song na pịa Chọpụta bọtịnụ na ala ziri ezi. The music tagger ga-amalite ịchọ ihe ọmụma sitere na internet ma ọ bụ nchekwa data ozugbo.
Cheta na: Ọ bụrụ na ị họrọ ọtụtụ songs, na Chọpụta button ga-anọchi ndị Chọpụta Họrọ bọtịnụ. Pịa bọtịnụ na usoro ihe omume ga chọọ ozi maka niile họrọ songs. Na ịchọta ozi maka niile music, dị nnọọ pịa iṅomi bọtịnụ na nkụnye eji isi mee. Na-aga, ọmụma ga-hụrụ na ọbụna duplicates nwere ike ota.
Mgbe ahụ họrọ otu song na pịa Mee button ịgbakwunye niile ozi na songs.
3 Dezie mkpado ọmụma dị ka ị na-amasị
Mgbe ụfọdụ, ihe omume na-akawanye si nchekwa data ghara igbo gị. Ị nwere ike idezi ya kpam kpam site onwe gị. Pịa na Dezie icon n'okpuru na pịnye ke ọ bụla okwu-amasị gị. Ọrụ a bụ kpam kpam ịnara dị ka gị onwe gị na àgwà ọma.
Ọzọ ọrụ uru banyere bụ na ị nwekwara ike igwu music site abụọ-na ịpị faịlụ thumbnail na mmemme. Chọrọ agbalị ya ugbu a? Nweta ya ibudatara na arụnyere na kọmputa gị na-amalite na gị na oru ngo ozugbo.
Olee otú Tinye Album Art ka Music on Mac